Intengiso yeBhanile yeNtengiso yePropathi yeeNtengiso amaxabiso aPasileyo- iLealWW
Intengiso yeBhanile yeNtengiso yePropathi yeeNtengiso amaxabiso amaxabiso aPhezulu- kwiRealWW
EyeKhala 01, 2016 by okwenyaniWW, Iimbono zizonke:
Ngaphandle kwento yokwenyani iWW yenethiwekhi yentengiso yasimahla, sikwanikezela ngeenkonzo ezithile ezihlawulelwayo ezifana isibhengezo-ntengiso kwibhanti kwiwebhusayithi yethu.
Ke ukuba ufuna indawo yentengiso kunye Isibhengezo sokuthengiswa kwezindlu kwixabiso eliphantsi Olona khetho lubalulekileyo kuwe iwebhusayithi yokuthengisa izindlu nomhlaba njengokwenyaniWW. Kule meko intengiso yakho iya kuba yeyona ifanelekileyo kumxholo wewebhusayithi kwaye ke unokulindela ukufikelela i-CTR ephezulu kakhulu.
Kananjalo singazamkela iibhanile ezingezizo ezepropathi ukuba zithelekisa iimeko zethu malunga nentengiso yesibhengezo.
Okwangoku inyani ye-WW ebonelela ngezantsi kweendawo zezentengiso kwintengiso yesibhengezo:
728 x 90 kwiphepha ngalinye $ 50.00 ngeentsuku ezingama-30 Cinezela ukuphuma (#1) Phuma(#2)
160 x 600 yonke indawo esecaleni $ 40.00 ngeentsuku ezingama-30 Cinezela ukuphuma
468 x 60 kwiphepha ngalinye $ 30.00 ngeentsuku ezingama-30 Cinezela ukuphuma
125 x 125 yonke indawo esecaleni $ 15.00 ngeentsuku ezingama-30 Cinezela ukuphuma
Ukuba iyafuneka, sinokongeza ii-slots zethu, ukucela indawo eyongezelelweyo-sithumele nge-imeyile [Imeyile ikhuselwe]
Kutheni isibhengezo sentengiso kwixabiso eliphantsi?
-Ewe ungabeka nje intengiso yasimahla kwi-realtyWW, kodwa le ntengiso iya kubonakala kuphela kwiphepha eli-1 ngelixa isibhengezo siya kubonakala phantse kwiphepha ngalinye.
-Iimpawu zinokutsala umdla wabakhenkethi beewebhsayithi ze-Intanethi, njengoko ihlala ingengomfanekiso oqingqiweyo, kodwa ibe yiminifilm, kwimeko yebhena esemgangathweni. Ke ngoko, ukuba isibhengezo siqulathe ulwazi olunomdla, umtyeleli uya kuya kwikhonkco kwaye unokusebenzisa ngokufanelekileyo iinkonzo ezinikezelwayo.
-Intengiso yebhanari kwi-Intanethi ingabekwa kwiindawo ezahlukeneyo. Ke, iya kujongwa ngamawaka abantu ngemini, kwaye kwangaxeshanye iindleko ziya kuba zincinci kunokuba, umzekelo, izibhengezo zentengiso kwizithuthi zikawonkewonke, okanye kwibhodi yebhodi.
Kwi-Intanethi ungabeka izibhengezo kwizibonelelo ezikhethekileyo, ezinemithombo eqinileyo yokufumana iindwendwe ezijolise kuzo. Ngelixa intengiso engaxhunyiwe kwi-Intanethi ibhekiswa, njengomthetho, kubo bonke abantu, kunye nokusebenza kwayo ngaxeshanye, ewe, iphantsi kakhulu.
-Njengomgaqo, ixabiso eliphantsi kukwenza isibhengezo seprojekthi ye-Intanethi kunokuyila nokuprinta isibhengezo sentengiso yangaphandle. Ngokukodwa kuba isibhengezo sentengiso ye-Intanethi sanelekile ukuba siyenze kube kanye kwaye sinokubekwa amaxesha angalawulwa, ngelixa isibhengezo sangaphandle sentengiso kufuneka siprintwe ngebhodi nganye okanye kolunye uhlobo lweendaba.
Imigaqo malunga nentengiso yesibhengezo
Oku kulandelayo yimizekelo yesiqulatho akuvunyelwanga kwi-realWW.
Qinisekisa ukuba isibhengezo sakho asihambelani neminye yale mizekelo:
Iividiyo eziboniswa ngokwesondo okanye iifoto zabantu bokwenyani, abantu abadumileyo okanye ezinye iindlela
Iinkonzo zesondo, indawo zokuthandana zabantu abadala, okanye izinto ze-BDSM-centric
Iimeko zesondo ezingekho mthethweni, ziyinyani okanye ziyinyani, ezifana nezo zibandakanya abantwana, ukudlwengula, ukubulala, okanye ukulala nezilwanyana
Iziyobisi (kubandakanya amayeza kagqirha), icuba (kubandakanya ne-e-cuba), utywala
Yenza iisayithi zemali, iinkqubo zokuthengisa kumanqanaba ngamanqanaba
Imizekelo yesiqulatho kuvunyelwe kwi-realWW
Ukuzonwabisa (iincwadi, amahlaya, imidlalo, njl njl.) Kunye nemixholo eyonwabisayo yosapho-akukho ukuthuka, ubundlobongela, okanye iimeko ezivuthiweyo
Iibhlog malunga nemisebenzi yabantwana
Amaphepha emfundo yabantwana
Isibhengezo sentengiso ngokubanzi
Intengiso yesibhengezo ithathwa indawo ekhethekileyo phakathi kwezinye iindlela zentengiso. Inikezela ngokwayo ukubeka kuthungelwano lwehlabathi lwebhanile ezisebenzayo kwi-intanethi ezinobungakanani obahlukeneyo. Isiphumo saso esiphambili sijolise kumbono obonakalayo wolwazi ngabasebenzisi beewebhusayithi ze-Intanethi kunye nobume befuthe lazo ukusikhumbuza konke ukubhengezwa okuqhelekileyo kumaphephandaba, amaphephandaba nakumabonwakude. Ngale ndlela yokubhengeza iinkonzo zabo, abantu bavame ukubhena ematyaleni xa kukho ukunyuselwa kwento entsha, okanye kucwangcisiwe ukwazisa abaphulaphuli ngokubanzi malunga neemveliso ezintsha. Amathuba eInternet yanamhlanje anokuvumela ukuba uwasebenzisele ukwenza i-roller ukuba zithandeke ezifanayo kumabonwakude.
Ke, intengiso yesibhengezo kwi-Intanethi isebenza ngokukuko kwaye ayibizi kakhulu kunalo naluphi na olunye uhlobo lwentengiso, kubandakanya intengiso engaxhunyiwe kwi-Intanethi. Kungenxa yoko iinkampani ezininzi ezibonelela ngeenkonzo ezithile, zijikisa kubarhwebi ababandakanyeka kwi-Intanethi, ukukhuthaza amashishini abo ngeendlela zokuthengisa kwi-Intanethi, kubandakanya nentengiso yesibhengezo.
Ke ukuba ufuna indawo yokwazisa ngebhanile yearhente yokuthenga kwixabiso eliphantsi- olona khetho lubhetele kuwe kufuneka lube yiwebhusayithi yokuthengisa izindlu nomhlaba njenge-realtyWW. Kule meko intengiso yakho iya kuba yeyona ifanelekileyo kumxholo wewebhusayithi kwaye unokulindela ukufikelela kwi-CTR ephezulu kakhulu.
okwenyaniWW Julayi 1, 2016
Olu ngeno yafakwa kwi Intengiso yeNtengiso yePropathi noqhotyosho Inethiwekhi yesibhengezo sentengiso, Isibhengezo sentengiso, Isibhengezo sentengiso eshibhile, Iibhanki Zentengiso, Intengiso yeWebhu, Isibhengezo sentengiso, Inethiwekhi yesiBhengezo seNtengiso, Izibhengezo zentengiso zenethiwekhi, Izibhengezo zeBhanner, Inethiwekhi yeNtengiso yeNtengiso, Intengiso yesibhengezo, Inethiwekhi yokuBhengeza intengiso, Izibhengezo zentengiso yesibhengezo, Isibhengezo esingabizi, Isibhengezo ngexabiso eliphantsi, Intengiso yesibhengezo, Intengiso yeNethiwekhi yeBhanari, Izitshisi ezibizi, Izitshisi zexabiso eliphantsi, Izitshisi kwiTV, Izitshisi kwiTV, IBannerson yexabiso eliphantsi, Bannersonthecheap, Eyona Ntanethi yesiBhengezo seNtengiso, Isibhengezo sentengiso eshibhileyo, IziBhengezo zeNtengiso eziPhantsi, Isibhengezo eshibhile, Iintengiso zebhanile ezishibhile, Intengiso yeBhanile engabizi, Inethiwekhi yokuThengisa iiBhanari ezingabizi kakhulu, Isibhengezo sendawo yokuthengisa izindlu nomhlaba, Izibhengezo zentengiso yearhente, Intengiso yeBhanile yeZindlu, IziBhengezo zentengiso yearhente, Iibhena zewebhusayithi zokuthengiswa kwezindlu, Isibhengezo sendawo yokuthengisa izindlu nomhlaba, Iibhena zewebhusayithi zokuthengiswa kwezindlu, UkuBekisa iiBanners, Izibhengezo zeNtengiso yeWebhu, Intengiso yeBhanti yeWebhu, Izitshisi zewebhu. Bookmark le Permalink.